Naya Bikalpa | २००७ को सशस्त्र क्रान्ति - Naya Bikalpa २००७ को सशस्त्र क्रान्ति - Naya Bikalpa
२००७ को सशस्त्र क्रान्ति
प्रकाशित मिती: २०७४ माघ २, ०८: ४८: ४१
नेपालमा वर्तमान शासनप्रणाली स्थापित भएको एक सय वर्षभन्दा पनि बढी भयो । यस व्यवस्थालाई राणशाहीको नाउँले पनि सम्बोधित गर्ने गरिएको छ । विगत शताब्दी भयङ्कर राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक दुष्परिणामको शताब्दि बनेको नेपालको इतिहास हो । जङ्गबहादुरले यस पारिवारिक शासन व्यवस्थाको सुत्रपात छल र कपटकोे भरमा गरे । नेपालका वास्तविक शासक महाराजधिराजलाई समेत राजबन्दीको रुपमा दरबारमा नजरबन्द झै राखेका छन् । राणाशाही राजा र प्रजाको बीचमा तगारो बनेको छ । राणावंशीय प्रधानमन्त्रीहरुलाई जनताप्रति कुनै स्नेह छैन वास्तवमा राजाद्धारा पनि उनीहरुलाई कुनै अधिकार प्राप्त छैन । उनीहरु देश र जनताप्रति योग्य हुने शासकको दायित्व कर्तव्यबाट धेरै टाढा छन् । यसप्रकारको निरङ्कुश व्यवस्थाप्रति जनताको रत्तिभर सद्भावना नुहुन स्वभाविक छ । नेपाली जनताका लागि विश्वका जनताले प्राप्त गरेको संवैधानिक अधिकार सपनाजस्तो भएको छ । शासकको निरङ्कुशता र स्वेच्छाचारिता नै यस व्यवस्थाको वास्तविक स्वरुप हो । अतः यस प्रकारको व्यवस्था जनताका लागि सधैभरी अप्रिय नै हुन्छ ।
राणा शासकहरुले नेपाललाई कहिल्यै पनि स्वदेश भनेर स्वीकार गरेनन् । नेपालमा राणाद्वारा गरिएको यति साह्रो शोषण त विदेशको कुनै सरकारले समेत गरेको पाइएको छैन । विगत सय वर्षमा संसारका विभिन्न देशहरुले अत्यन्त उन्नती गरेको स्पष्ट छ । युरोपले सामन्तकालीन युगको घेराबाट बाहिर निक्लेर नयाँ युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । युरोपमा औद्योगिकीकरणको विस्तारले गर्दा नितान्त नयाँ सभ्यताको जन्म भएको छ । हिन्दुस्तान विदेशको पञ्जामा फसेको हुँदा युरोपले झै प्रगति गर्न सकेन । तर, नेपालसँग तुलना गर्ने हो भने हिन्दुस्तानले पनि आश्चर्यजनक प्रगति गरेको छ । हामीले विगत शताब्दीको विश्व इतिहास हे¥यौं भने स्वाशासित राष्ट्रहरुले प्रत्येक क्षेत्रमा गौरवपूर्ण उन्नति गरेका देख्छौं । तर, हामी नेपाली नागरिकहरु भने अझ पनि युगविरोधी मध्ययुगीन प्रतिक्रियावादी शासकको जाँतोमा पिसिइरहेका छौं ।
राणाशाही व्यवस्थाको विगत सय वर्षभित्रको तस्बिर प्रत्येक नेपालीको हृदयमा टाँसिएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा हेर्ने हो भने आजको वैज्ञानिक युगमा हुनुपर्ने औद्योगिक विकास हाम्रो देशमा हुन सकेको छैन । खेतीका अतिरिक्त नेपालका सम्पूर्ण उद्योगधन्दामा लगाइएको पुँजी दुई करोडभन्दा बढी छैन । एक करोड जनतालाई आवश्यक हुने वस्तु उत्पादनका लागि दुई करोडभन्दा पनि कम पुँजी लगानी हुनु दुःखको चरम अवस्था हो । । सरकारले कृषि विकासका कार्यमा पनि कुनै योजना कार्यान्वयन गरेको छैन । त्यसको परिणामस्वरुप अन्नको उत्पादनका आश्चर्यजनक किसिमले कम हुँदै गएको छ । श्रमिक किसानबाट देशको उर्वर जमिन खोसेर राणाशाहीका जी–हजुरिया, बिर्तावाल एवं जमिनदारहरुलाई बाँडिएको छ ।
देशको स्थिति दयनीयताको चरम सीमामा पुगिसकेको छ । ७५ प्रतिशत पहाड वासीमा एक छाक अन्न र एउटा घरका लागि पनि हाहाकार छ । तराई वासीको अवस्था झन् विकट छ । उद्योगधन्दा र खेतीमा समेत आघात परेकाले प्रतिवर्ष १० हजारभन्दा बढी हाम्रा दाजुभाई रोजीरोटीको खोजीमा भारत पस्छन् । देशको सम्पतिको मुख्य भाग राणशासकको बिर्ता बनिसकेको छ । फलतः अहिले नेपालमा डङ्गुर ढुकुटी भएको शासक वर्ग र प्रतिदिन लुटिइरहेको गरिब प्रजा गरी दुई आर्थिक वर्ग मात्र शेष छन् । मध्यमवर्ग प्रतिदिन गरिब वर्गमा बदलिँदै छ । सरकारी कार्यमा यथासम्भव कम खर्च गरेर बचत भएको राष्ट्रको नोट प्रतिवर्ष प्रधानमन्त्रीका नाममा विदेशी बैंङ्कमा जम्मा भइरहेको छ । सरकारी कर्मचारीले नाम मात्रको तलब पाउँछन् । सरकारी अड्डामा घुसखोरीको बिगबिगी हुनु नै तलब कम हुनुको प्रमाण हो । सामान्य श्रेणीका सरकारी कर्मचारी आधार पेट खाएर सरकारी हुकुमको पालना गर्छन् । पल्टनका सिपाहीहरुको स्थिति अझ दयनीय छ । उनीहरुले दुई छाक खान पनि असम्भव प्रायः छ । राणा प्रधानमन्त्रीहरु आफ्ना सिपाही र कारिन्दाको पेटसमेत काटेर बैङ्क ब्यालेन्स थप्छन् । नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुले प्रतिवर्ष अढाइ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ आफ्ना लागि जोगाउने गरेको अनुमान छ । नेपाली प्रधानमन्त्रीहरुले यो एक सय वर्षभित्र कम्तीमा पनि एक अर्ब रुपैयाँ भावी नेपालमा कहिल्यै फर्काउन नसकिने गरी विदेशी बैङ्कमा पु¥याइएका छन् । नेपाली जनताको खुन र पसिनाले यो जघन्य अपराधलाई कहिल्यै बिर्सने छैन ।
वर्तमान राणाशासनको जग नै अन्यायपूर्ण भएकाले यसको वास्तविक शक्ति पनि बेइमानी गर्नु नै हो । त्यसैले यस सरकारले जनतालाई पङ्गु बनाएर राख्ने नीति अपनाएर दमन गर्छ । सरकारले जनतालाई पङ्गु बनाएर राख्ने नीति अपनाउनु कुनै आश्चर्यको कुरा होइन । स्कुल, कलेज र पाठशाला खुले भने जनता शिक्षित हुन्छन्, तर हामी कहाँ ज्ञानको पुञ्जमै शासकको प्रथम कुदृष्टि प¥यो । कस्तो कटु सत्य, आजको युगमा हामीकहाँ ज्ञानको पनि सारा एक करोड देशबासीका लागि आठवटा मात्र हाइस्कूल छन् । कहीँकहीँ पाठशालाको नाम सुनिन्छ । राष्ट्रभरिमा एक मात्र त्रिचन्द्र कलेज छ । शासक वर्ग शिक्षण क्षेत्रमा हुने खर्चलाई आफ्नो बचतको दुरुपयोग सम्झन्छ ।
त्यही कारणले गर्दा आज हाम्रो देश दुनियाँको सर्वाधिक अशिक्षित देश हुन पुग्यो । गरिब देशवासी आफ्नै पूँजीबाट स्कूल पाठशाला खोल्ने चेष्टामा लागे पनि उनीहरु शासकको कुदृष्टिबाट बच्न पाउँदैनन् । दुनियाँको प्रत्येक देश र सरकार जनतालाई सुशिक्षित तुल्याउन सचेत छन् । तर, हाम्रो देशको सरकारले भने त्यसको ठीक विपरीत देश अशिक्षित रहे मात्र जनतामा स्वेच्छाचारी राज्य कायम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास राखेर घोर शिक्षाविरोधी नीति अख्तियार गरेको छ ।
जबसम्म देशवासीहरु एक सुत्रमा बाँधिदैनन् तबसम्म अन्यायीले अन्याय गरिरहन्छन् । सङ्गठन जनताको तागत हो । जतिसुकै ठुलो अत्याचारी भए पनि उसको अत्याचार सङ्गठित जनताका अगाडि टिक्न सक्तैन । आफ्ना उचित मागहरुको आडमा नेपाली जनतालाई सङ्गठित गर्ने ध्येयले नै नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापना गरिएको छ । तसर्थ नेपाली काङ्ग्रेसको तागत नै जनताको तागत हो । राणाशाहीको अन्त्य अब टाढा छैन । राणाशाहीलाई देशी विदेशी परिस्थितिले थिच्दै आएको छ । राणाशासन भित्रभित्रै मकिइसक्यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि एसियामा उर्लिएको स्वतन्त्रताको भावनाको प्रभावमा सयौं वर्ष दासताबाट हिन्दुस्तान स्वतन्त्र भयो । नेपालमा पनि त्यसको ठूलो असर परेको छ । हिन्दुस्तानबाट अङ्ग्रेजजस्तो बलियो शासनतन्त्र त पूर्णत हट्न सक्छ भने राणाशाकको के कुरा ? यसमा के सार छ र ? नेपाली जनताले यस तथ्यलाई पूर्णतः बुझिसकेका छन् । नेपालमा पनि दोस्रो विश्वयुद्धपछि आन्दोलनहरु भए । विराटनगरमा मजदुर हड्ताल र नेपाली कांङ्ग्रेसद्धारा सन् १९४७ मा सञ्चालित जनआन्दोलनपछि जनताका अनेक साना ठूला प्रदर्शनहरु भए ।
नेपाली कांङ्ग्रेसको ध्येय स्पष्ट छ । ऊ महाराजधिराजको वैधानिक नायकत्वमा जनताप्रति जनउत्तरदायी शासन कायम गर्न चाहन्छ । निरङ्कुश राणशाहीले महाराजधिराजलाई पनि अरुलाई जस्तै स्वतन्त्रताबाट वञ्चित राखेर अधिकारविहिन तुल्याएको छ । आज हामी महाराजधिराजलाई पनि बन्दीतुल्य जीवनबाट मुक्त गरेर राज्यको प्रधान पदमा प्रतिस्थापित गर्न चाहन्छौं । महाराजधिराजसँग पनि पछि गएर स्वेच्छाचारी एवं निरङ्कुश हुनुसक्ने बाटो नराहोस् भनेर हामी उहाँलाई एक वैधानिक शासकले पाउनुपर्ने जति अधिकार मात्र प्रदान गर्नेछौं भन्ने पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छौं । जनताका प्रतिनिधिहरुद्वारा निर्मित विधान अनुसार उहाँका नाउँमा सरकार चल्नेछ । शासनको सम्पूर्ण बागडोर जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको हातमा रहनेछ । निर्वाचनका आधारमा जनताबाट आउने जनप्रतिनिधिमार्फत महाराजाधिराजले शासन चलाउनका लागि मन्त्रिमण्डल खडा गरेर, उसैको नियन्त्रणमा रहेर शासन गर्नुपर्ने छ ।
हामी स्वेच्छाचारी राजा मन पराउँदैनौं । हाम्रा मागमध्ये प्रमुख माग नै उत्तरदायी शासन स्थापना गर्नु हो । जनताप्रति जवाफदेही सरकारको शासन नै उत्तरदायी शासन हो । सरकारले आफ्ना क्रियाकलापहरुको सारा लेखाजोखा जनतालाई बुझाउनुपर्छ भन्ने यसको तात्पर्य हो । जनतालाई सरकारको कार्यक्रम मन परेन भने त्यसलाई तुरुन्त खारेज गर्न सक्छन् । अर्थात, उत्तरदायी शासन कायम भइसकेपछि शासकले कुनै प्रकारका मनोमानी गर्न पाउने छैन । सरकार जनताको राय अनुसार पाइदा चाल्न बाध्य हुनेछ । महाराजधिराजको सम्पूर्ण शासन चलाए पनि सारा नियम कानुन जनताका प्रतिनिधिहरुबाट नै तय गरिनेछ । मन्त्रिमण्डलको काम त केवल ती नियम कानुनलाई देशमा लागु गर्नु मात्र हुनेछ । सङ्क्षेपमा, उत्तरदायी शासनको अर्थ शासनसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार जनतामा निहित रहनेछ भन्ने हो । वर्तमान शासनको अन्त्य भइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले बालिग मताधिकारको आधारमा चुनिएका जनप्रतिनिधिको एउटा परिषद् वा सभा बोलाउनेछ । नेपाल जनराज्यको संविधान वा राज्य संचालनसम्बन्धी नियम कानुन बनाउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी त्यही परिषद् वा सभालाई सुम्पिइनेछ ।
यद्यपि स्वेच्छेचारी शासनको जाँतोमा पिसिइरहेका हामी नेपालीलाई यसबेला प्रजातन्त्रवादका सम्बन्धमा कुनै पनि सम्झौतावादी विचार अरुचिकर हुनेछ । तर, प्रजातन्त्रवादी देशरुको इतिहासले हामीलाई जबसम्म न्यायपूर्ण आधारमा समाजको पुननिर्माण भई सक्तैन, तबसम्म समाजको सर्वाङ्गीण विकास सर्वथा असम्भव छ भन्ने पाठ पनि सिकाएको छ । प्रजातन्त्रवाद राजनीतिक क्षेत्रमा स्थापित भइसकेपछि पनि समाजमा आर्थिक शोषण रहिरह्यो भने जनताको सुख र समृद्धिमा कुठाराघात नहोला भन्न एकदमै सकिँदैन । नेपाली काङ्ग्रेसले त्यस पक्षलाई ध्यानमा राख्दै राजनीतिक साथै आर्थिक समानतामा उभिएको प्रजातन्त्रलाई आफ्नो आदर्श मानेको छ ।
उदाहरणका लागि, नेपालको वर्तमन अवस्थामा पाँच प्रतिशत व्यक्तिका हातमा देशको अधिकाङ्श जमिन हुनु तथा बाँकी ९५ प्रतिशत व्यक्ति भूमिहिन रहनुलाई नेपाली काङ्ग्रेस अन्यायपूर्ण ठानेर यसको घोर विरोध गर्दछ । नेपाली काङ्ग्रेसको विचारमा यस्तो अन्यायपूर्ण बन्दोवस्त हटाएर भूमिको पुनः न्यायपूर्ण वितरण हुनुपर्छ । आजसम्म पनि नेपालको आर्थिक आधार खेती नै भएकाले वर्तमान अन्यायपूर्ण भूमि वितरणको ठाउँ न्यायपूर्ण बन्दोबस्त हुनु नेपालका लागि सबभन्दा ठूलो आर्थिक क्रान्ति हुनेछ भन्ने ठहर नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको छ ।
नेपालमा अहिलेसम्म ठूलाठूला उद्योगधन्दा र मिल कारखानाहरुको विकास हुन सकेको छैन । नेपाली काङ्ग्रेसले त्यस विषयमा पनि आफ्नो स्पष्ट नीति निर्धारण गरेको छ । नेपालमा उद्योगधन्दाको उदय भइसकेको छैन । नेपाली काङ्ग्रेसको विचारमा निकट भविष्यमा जनताको सरकार कायम भइसकेपछि त्यस सरकारले देशमा औद्योगिकीकरणको यथोचित भार आफैं उठाउनुपर्नेछ । नेपालमा जनराज्य कायम भइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले देशमा औद्योगिकरण गर्ने बृहत् योजना ल्याउने विचार छ । नेपाली काङ्ग्रेसले कारखाना वा अन्यत्र काम गर्ने मजदुर वा कर्मचारीहरुलाई प्रजातन्त्रवादी सिद्धान्तका आधारमा आफ्नो ध्येयअनुसार सङ्गठन खोल्न वा युनियन बनाउन पूर्ण स्वतन्त्र प्रदान गर्नेछ ।
आजको वैज्ञानिक युगमा आपसी सम्बन्धका कारण दुनियाका सबै राष्ट्र एक सूत्रमा गाँसिएका छन् । अतः कुनै पनि देशको विदेश नीति महत्वपूर्ण मानिनेछ । नेपाली काङ्ग्रेस आफूलाई नेपालको पूर्ण स्वतन्त्रता एवं सार्वभौमिसत्ताको कट्टर रक्षक ठान्दछ । नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको पूर्ण स्वतन्त्रता एवं सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै संसारका अन्य देशहरुसँग दौत्यसम्बन्ध कायम गर्ने कुराको समर्थन गर्दछ । नेपालको भारतसँग धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा पुरानो सम्बन्ध छ । अतः हामी भारतको हरसम्भव उन्नतिको कामना गर्दै ऊसँग घनिष्ट सम्बन्ध कायम गर्न इच्छुक छौं । नेपालले कहिल्यै पनि भारतको अहित चिताउने छैन । भौगोलिक अवस्थाका कारण पनि यी दुई देशबीच कुनै प्रकारको विरोध उत्पन्न हुनु कदापी लाभप्रद हुनेछैन । निकट भविवष्यमै स्वतन्त्र हुन गइरहेको भारतले पनि नेपालको कुनै प्रकारको अहित सोच्ला भन्ने कल्पना हामीहरु हदापी गर्न सक्तैनौं । नेपालको स्वतन्त्रता र गौरवमा कुनै प्रकारको धक्का लाग्दैन् वा देशको अहित हुँदैन भन्ने वर्तमान निरङ्क्श शासनद्वारा गरिएका भारत र नेपालबीचका सन्धिहरुलाई पनि नेपाली काङ्ग्रेस यथावत स्वीकार गर्दछ । अन्यथा भविष्यमा स्थापित हुने नेपालको प्रजातान्त्रिक सरकारले स्वदेश र भारत दुवैको हितलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ सन्धि गर्नेछ ।
अतः हामी भारतको हरसम्भव उन्नतिको कामना गर्दै ऊसँग घनिष्ट सम्बन्ध कायम गर्न इच्छुक छौं । नेपालले कहिल्यै पनि भारतको अहित चिताउने छैन । भौगोलिक अवस्थाका कारण पनि यी दुई देशबीच कुनै प्रकारको विरोध उत्पन्न हुनु कदापी लाभप्रद हुनेछैन । निकट भविष्यमै स्वतन्त्र हुन गइरहेको भारतले पनि नेपालको कुनै प्रकारको अहित सोच्ला भन्ने कल्पना हामीहरु हदापी गर्न सक्तैनौं । नेपालको स्वतन्त्रता र गौरवमा कुनै प्रकारको धक्का लाग्दैन् वा देशको अहित हुँदैन भन्ने वर्तमान निरङ्क्श शासनद्वारा गरिएका भारत र नेपालबीचका सन्धिहरुलाई पनि नेपाली काङ्ग्रेस यथावत स्वीकार गर्दछ । अन्यथा भविष्यमा स्थापित हुने नेपालको प्रजातान्त्रिक सरकारले स्वदेश र भारत दुवैको हितलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ सन्धि गर्नेछ । अन्य देशहरुको तुलनामा नेपालको विशेष घनिष्ठता भारतसँग नै भएकोले प्रजातान्त्रिक नेपाल र अन्य देशबीच हुने आपसी सम्बन्ध पनि भारतीय नीति अनुकुल नै हुनेछ । नेपालको चीनसँग पनि पुरानो सम्बन्ध छ ।
चीनको क्रान्तिमा जनभावनाको विस्फोट भएको छ । नेपाली काङ्ग्रेस चीनको नवनिर्मित सरकारप्रति सद्भाव राख्दछ । नेपालमा विदेशबाट हुने सामरिक वा आर्थिक कुनै प्रकारको हस्तक्षेपलाई नेपाली काङ्ग्रेस मन पराउँदैन । नेपालका वर्तमान निरङ्क्श शासकले अझै केही दिन कायम रहने उद्देश्यले विदेशी शक्ति भित्र्याएर सहायता प्राप्त गर्ने नीति अपनाएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेस नेपालमा विदेशी शक्तिहरुको हस्तक्षेपको घोर विरोध गर्दछ । नेपाली काङ्ग्रेसको विचारमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता पाउनुपर्छ । संसारमा शान्ति कायम गर्ने उद्देश्यले गठित कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनमा नेपाल सम्मिलित हुनुपर्छ । हाम्रा सम्पूर्ण विदेश सम्बन्धी नीतिको आधार नै विश्वशान्ति हुनेछ । एसियाली देशहरुको स्वतन्त्र सङ्ग्रामप्रति हामीमा सामाजिक दृष्टिबाट निकै ठूलो जवाफदेही छ । हामी एसियाली देशहरुमा विदेशी प्रभुत्व, हस्तक्षेप एवं सामन्त शाहीको अन्त्य होस् र त्यस ठाउँमा पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना होस् भन्ने चाहन्छौं । (राजतन्त्र र लोकतन्त्र भाग १, २०३०) (बी.पी कोइराला र लोकतन्त्र नाम पुस्तकबाट)
२०७४ माघ २, ०८: ४८: ४१